Momba anay - Wuxi Boln Laser Tech Co., Ltd.
BOLN Laser dia orinasa teknolojia avo lenta izay manambatra ny serivisy R&D, ny famokarana, ny marketing ary ny serivisy aorian'ny fivarotana. Izahay dia manam-pahaizana manokana amin'ny indostria manan-tsaina amin'ny laser marika fitaovana, ary manome matihanina ankapobeny mandeha ho azy vahaolana miorina amin'ny laser marika fampiharana.
Ny vokatray lehibe dia misy ny serial laser manamarika serials, serial laser manamarika serials, laser ultraviolet manamarika serials sns. Ny vokatra rehetra dia afaka mamatsy tsipika famokarana isan-karazany, fitaovana mandeha ho azy ary mihatra amin'ny tontolo indostrialy maro.
Ireo fitaovana rehetra ireo dia nampiasaina be tamin'ny fampiasana chip, circuit accessories, indostrialy, famantaranandro, fitaovana elektronika sy serasera, kojakoja aerospace, kojakoja fiara, fitaovana ao an-trano, fitaovana enti-miasa, bobongolo, tariby sy tariby, famonosanan-kanina, firavaka, sary. ary ny fanamarihana lahatsoratra amin'ny sigara sy miaramila, ary ny laharan'ny famokarana betsaka.
Manana fahaiza-manao fikarohana tena matanjaka izahay. Ny ekipanay R&D mahay dia nahazo patanty maro sy zon'ny mpamorona lozisialy am-polony. Ny orinasanay dia manaraka ny R&D tsy miankina ary mifantoka amin'ny traikefan'ny mpampiasa, fanavaozana mitohy, mamita ny famolavolana rehetra avy aminay. Mba hahazoana antoka fa azo fehezina ny fizotran-javatra rehetra ary manafoana ireo toe-javatra tsy ampoizina mandritra ny fanatanterahana tetik'asa, dia raisinay ny paikady novolavolaina fa tsy ny famolavolana programa ivelany sy mahaleo tena, manome vahaolana sy serivisy hijanona ho an'ny mpampiasa ho an'ireo mpampiasa.
Ny vokatra tsirairay avy amin'ny Laser BOLN dia dinihina mafy araka ny fenitra ISO9001 alohan'ny hametrahana azy eny an-tsena. Andian-tsarimihetsika laser maro no nahazo mari-pankasitrahana CE.